छुटकाराको भावनाबाट आन्दोलन | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स छुटकाराको भावनाबाट उद्धारको प्रार्थना
व्यवस्था २:28:१:13 परमप्रभुले तिमीलाई पुच्छर होइन शिर बनाई राख्नु भएको थियो। तिमी माथिबाट कोही पनि हुनेछैन। यदि तिमी म पालन गर्न र तिनीहरूलाई गर्न, यो दिन तिमीलाई आज्ञा जो परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा निम्ति hearken कि:
परमेश्वरको प्रत्येक बच्चा उच्च जीवन जीउन नियुक्त गरिएको छ। परमेश्वरको कुनै बच्चा जीवनमा कष्ट भोग्न जन्मेको छैन। पूर्वानुमान गरेर, हामी सबैको लागि व्यवस्थित गरिएको छ पदोन्नति केवल र कहिल्यै प्रजनन छैन। आज हामी प्रलयको भावनाबाट उद्धारको प्रार्थना हेर्नेछौं। डेमोसन शैतानको एक दुष्ट आत्मा द्वारा नियन्त्रित छ। यसै कारणले गर्दा तपाईले विश्वास गर्ने धेरै व्यक्तिलाई तल र डाउनबाट पीडित भएको देख्नुहुन्छ, आज तिनीहरू माथि छन्, टोमोरो तिनीहरू तल छन्। एक पटक तिनीहरू धनी हुन्छन्, र केही समय पछि गरिबी फिर्ता हुन्छन्।
यो छुटकारा प्रार्थना तपाईंलाई स्थिरताको हर दागबाट स्वतन्त्र हुने शक्ति प्रदान गर्दछ र पछाडि शैतान तपाईंको जीवन र गन्तव्य मा राखिएको हुन सक्छ। जब तपाईं यस छुटकाराको प्रार्थनामा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईंले बलपूर्वक तपाईंको छुटकारा लिनुहुनेछ र शैतान र त्यसका एजेन्टहरूलाई जीवनको लागि लाजमा पार्नुहुनेछ।
डिमोशन भनेको के हो?
डेमोशनको अर्थ तल ल्याउने, हटाउने, विस्थापित हुने अधिकारको उच्च स्तरबाट तल्लो तहमा वा कुनै स्तरमा छैन। यसको अर्थ एक उच्च र गौरवशाली स्थितिबाट एक अपमानजनक र अपमानजनक ठाउँमा ल्याउनु पनि हो। डिमोशनको अर्थ जीवनमा टाउकोबाट पुच्छरमा ल्याउनु हो।
प्रत्येक प्रकारको विध्वंश हाम्रो जीवनको लागि भगवानको इच्छा होइन। गोगले उहाँको वचनमा भन्दछ कि हामी सँधै मात्र हुनेछौं र पुच्छर होइन, व्यवस्था २ 28:१:13। यसले केवल यो सlies्केत गर्दछ कि हाम्रो लागि ईश्वरीय उत्तम इच्छा केवल ओन्टोमा हुनु हो। कसैले पनि परमेश्वरको सेवा गर्दैन र जीवनमा तल आउँछ। कसैले पनि उसको सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई पछ्याउँदैन र जीवनमा अन्तमा अन्त हुन्छ।
डेमोशन शैतानको हो, शैतान सधैं परमेश्वरको छाउनीहरूलाई जीवनमा ल्याउने तरिकाहरू खोज्दछ। उनले बगैंचामा आदम र हव्वालाई धोका दिए र मानिसबाट ईश्वरीयताबाट मानिसजातिलाई अवनत गरे, मानिसलाई अमरत्वबाट मृत्युदरमा झिकियो, मानिस माटोमा परिणत भयो। त्यो शैतानको काम हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ कि येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट मानिसजातिलाई अब आफ्नो उचित स्थानमा फर्काइएको छ। शैतानले मानवजातिलाई भoted्ग गर्‍यो, तर येशूले हामीलाई सदाका लागि पदोन्नती गर्नुभयो, हालेलुआ !!! आज यो अस्थिर प्रार्थनाका माध्यमबाट तपाईं पनि येशू ख्रीष्टको नाममा भस्म हुने भावनाबाट मुक्त हुनुहुनेछ। तर म कसरी विध्वंसको भावनालाई हटाउन सक्छु?
कसरी डिमोशनको आत्मालाई हटाउने?
भजनसंग्रह २:: १ हे मेरो परमेश्वर, मेरो चट्टान, म तपाईंलाई पुकार्छु। मलाई चुप नलाऊ, यदि तिमी मसित चुप लाग्यौ भने, म खाडल भित्र गएकाहरू झैं हुनेछु।
प्रार्थना तपाईंको जीवनमा विध्वंस गर्ने आत्माको शक्तिहरूलाई नष्ट गर्न महत्वपूर्ण छ। भगवानको बच्चाको रूपमा, तपाईंको जीवनमा विध्वंसको भावनालाई हटाउने एक मात्र तरिका भनेको परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाहरू हो। प्रार्थना तपाइँको जीवनको हरेक क्षेत्रमा निरन्तर पदोन्नतीहरू, पदोन्नतिहरूको जीवनको लागि महत्वपूर्ण कुञ्जी हो। जहिले पनि तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईंले भगवानलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं दुबै समान टोलीमा हुनुहुन्छ। जब भगवान तपाईंको टोलीमा हुनुहुन्छ, तपाईंको सफलता पक्का छ। मलाई ध्यान छैन शैतान र परिस्थितिले तपाईंलाई कति तल ल्यायो, जब तपाईं परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाहरूको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईंको lfe मा विध्वंस को सबै शक्ति येशूको नाम मा सदाका लागि नष्ट गरिनेछ। मैले सावधानीपूर्वक केहि छुटकारा प्रार्थनाहरू चयन गरेको छु जुन तपाईंलाई विध्वंशको भावनाबाट स्वतन्त्र बनाउँदछ। यस प्रार्थनालाई आज विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाईं येशू ख्रीष्टको नाममा प्रचारका साक्षीहरू बाँडनुहुनेछ
१. बुबा, म तपाईंको नाम र मेरो जीवनको लागि येशूको नाममा राख्दछु।
२. बुबा, म मेरा सबै कमजोरीहरूबाट कृपा पाउँदछु, येशूको नाममा प्रभुलाई क्षमा गर्नुहोस्
My. मेरो प्रचारमा लड्ने प्रत्येक गोल्यत, अब येशूको नाममा आगोमा छरपस्ट हुनुहोस्
Every. प्रत्येक बोक्सीविद्या दर्पणले मेरो प्रगतिलाई भडकाउँछ, येशूको नाममा अब आगोले तितरबितर हुन्छ
My. मेरो ताराका सबै शिकारीहरू यस वर्ष येशूको नाममा गाडिनेछ
My. मेरो प्रमोशनको सबै शत्रुहरू ठेस लागोस् र येशूको नाममा पर्न दिनुहोस्
Progress. मेरो प्रगतिको प्रतिरोध गर्ने प्रत्येक समस्याको नदी अहिले येशू ख्रीष्टको नाममा सुक्नेछ।
Promotion. मेरो पदोन्नतिको बिरूद्ध लड्ने हरेक दुष्ट स्गठन, अब येशू ख्रीष्टको नाममा अव्यवस्थित हुनुहोस्
Signs। चिह्न र आश्चर्यका परमेश्वर, ईश्वरको नाममा मेरो जीवन र व्यवसायमा तपाईंको शक्ति प्रदर्शन गर्नुहोस्
मेरो भाग्यको फारो, अब येशू ख्रीष्टको नाममा मर्नुहोस्
११. मेरो जीवन र भाग्यको कुनै पछाडिएको क्षेत्र अब येशूको नाममा नष्ट गरिदिनुहोस्।
१२. मेरो जीवन र भाग्यमा भेषमा वा निक्षेपमा रहेका सबै शैतानीहरू, जसले मेरो जीवनमा विध्वंश ल्याउँछ, म तिनीहरूलाई येशूको रगतले बाहिर निकाल्दछु।
१.. मेरो जीवनमा शैतानको हरेक शैतानी एजेन्डा मलाई हटाउन, अब तिनीहरूलाई तितरबितर पार्छु !!! येशू ख्रीष्टको नाममा।
१ w. बोक्सीविद्याको प्रत्येक झाडूले मेरो पदोन्नति हटाउँदछ, म येशूको नाममा आगोमा झाडाहरू पोल्दछु।
१ promotion. मेरो गाउँमा मेरो प्रचारको बिरूद्धमा लड्ने हरेक फरोहै येशूको नाममा कलंकित र नष्ट गरिनेछ
१ Jesus. म येशूको नाममा मेरो भविष्यसूचक भाग्यमा प्रवेश गर्दछु
१ Jesus. म येशूको नाममा जीवनमा मेरो खोजीमा ईश्वरीय गति प्राप्त गर्दछु
१ life. मेरो जीवनको सबै क्षेत्रहरु मा, म येशूको नाम मा चारैतिर पदोन्नति अनुभव गर्नेछौं
२०. मँ भन्छु कि मसँग एक उत्कृष्ट आत्मा छ जुन येशूको नाममा ममा काम गरिरहेको छ
२१. म टाउको हुँ र येशूको नामको पुच्छर होइन
धन्यबाद येशू ख्रीष्ट।
अघिल्लो लेखमाउपवास र शक्ति को वर्षा को लागी प्रार्थना
अर्को लेखमाAns प्रार्थनाहरू जवाफ दिंदा परमेश्वरलाई बाधा दिन सक्ने कुराहरू
जिम मुकुपा जनवरी १०, २०२० बिहान :11: 2020
धन्य पास्टर, तपाई अति उत्तम हुनुहुन्छ, तपाईका पाठ र निर्देशित प्रार्थनाहरू मेरो लागि साँच्चिकै फाइदाजनक छ म भूतहरूको प्रतिरोध गर्ने उपायहरू जान्दछु। भगवान हाम्रा प्रभुले तिमीलाई आशीर्वाद दिऊन्।
शेरी हेस्टर जनवरी २,, २०२० १०:०० अपराह्न
धन्यबाद म्यानको अब्राहमको आशिष्का लागि म धनी हुँ म टाउको हुँ पुच्छर शेरी भन्दा माथि छ र तल छैन
कृपया मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् ईश्वरले मेरो जीवनमा केहि नयाँ गर्नुहोस् म भगवानलाई विश्वास गर्दछु